KALANCHOE MANGINA: SHARAXAADDA NOOCYADA, SAWIRADA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Iyadoo ku xiran nooca, Kalanchoe waxay u dhacdaa sida geedo-qoyan, iyo geedo dhiiqo ah.
Laakiin kiis kasta, dhammaan noocyada geedka this waa succulents.
Beeraleyda ubaxa waxay og yihiin ugu yaraan laba boqol oo nooc oo Kalanchoe ah, iyo nooca ay yihiin qoyska reer Crassulaceae.
Guryaha dabiiciga ah waa kulaylaha Australia, Ameerika, Aasiya iyo Afrika.
Leaves Noocyada kala duwan way ka duwan yihiin midba midka kale.
Waxay yihiin fareem, mararka qaarkood waxay leeyihiin qaab asaasi ah, gees ama qaawan. Ku dheji jirridda sida asliga ah, iyo kaliya habka sedentary.
Inflorescences waa casaan, caddaan, oranji, jaale ah, waxay leeyihiin qaab rucubo dabacsan ama gacmo gashi ah.
Ku dhowaad dhamaan noocyada kala duwan ee quruxda leh ee la soo saaray marka la eego nuxurka qolka.
Qodobka ugu muhiimsan ee beerashada guuleysta - si taxadar leh u raacso dhammaan talooyinka xanaanada.
Kalanchoe manginii waa geedka dhirta lagu qurxiyo oo lagu qurxiyo geedo ka mid ah kuwa suugaanta.
Waxay u dhigantaa qoysaska of bollards. Aagga dabiiciga ah ee qaybinta - Afrika. Waxay leedahay dhuuban, hoos udhaca afkoda gaadhaya dherer 30-35 cm.
Caleemaha waxay ku yaalaan ka soo horjeeda, waxay leeyihiin qaab quruxsan, fareeshka, marmarka qaarkood waxoogaa qallafsan, midab casiir leh oo cagaaran.
Kalanchoe Mangina Blooms dhamaadka guga, ubaxyada ayaa waxay la mid yihiin kooxo dabacsan, oo ay ku jiraan 10-15 ubax. Ubaxa waa gabbal-qaabeeya, qulqulaya, casaan-casaan midab leh iyo mid dhexdhexaad ah.
Isla mar ahaantaana warshadda waxay noqon kartaa dhowr xabbadood oo ubax ah. Burooyinkeeda qanjirada waxaa lagu dhajiyaa gudaha inflorescences.
Kalanchoe Mangina sawiro:
Xilliga jiilaalka heerkulka qolka Laga soo bilaabo Kalanchoe waa in uu jiraa agagaarka 10-12C. Xilliga diiran, geedka ayaa gabi ahaanba wax u dhimaya xaaladaha heerkulka ku xeeran.
Waa lagama maarmaan in biyaha la yareeyo, laakiin aad bay u badantahay.
Biyaha waa inay noqdaan kuwo jilicsan, nadiif ahna diiran. Qoyaan ciidda maadaama ay jilciso lakabka sare. Haddii dhulku uu si fiican u engegay, dhirta ayaa iska tuuri doonta dhammaan caleemaha. Waxaa lagu waraabin karaa digsiga.
Si aad u degto Kalanchoe Mangina waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo ciidda humus compost lagu qaso ciid. Dheriga waa in uu ahaado lakab oo dheecaan leh.
Waxaad iibsan kartaa isku dar ah oo isku diyaar ah oo isku diyaar ah oo loogu talagalay succulents.
Kalanchoe wax badan sawir qaade. Laakiin xilliga xagaaga waa inay ka ifkaataa iftiinka qoraxda. Haddii kale, caleemuhu waxay noqon karaan gaduud iyo hoos u dhac.
Mudada ugu wanaagsan ee iftiinka qoraxda waxaa loo qaadan karaa 12 saacadood. Waxaa lagu talinayaa in laga bilaabo dhammaadka guga ilaa bilowga dayrta dheriga waa inuu daaqada ka soo galaa dhinaca galbeed ama dhinaca bari.
Xilliga jiilaalka, Kalanchoe waxaa dib loo habeynayaa daaqada koonfureed. Iyada oo hoos hoose iftiin, geedka waa in la cillad ah.
Kalanchoe Mangina - warshad aan qabin oo si fiican u horumarisa heer kasta oo qoyaan ah, haddii heerkulka saxda ah la hayo.
Uma baahna inaad ku buufiso, marka laga reebo cimilada kulul oo qallalan. Maadaama caleemaha ay yihiin fareeshka, qoyaanka ka soo baxa uumi uumiga ah iyo geedka ayaa iskiis ku filan xitaa kuleylka.
Kalanchoe Mangina u baahan tahay bacrimiya kaliya xagaaga, iyo inta lagu jiro formation of burooyinkeeda. Qaado Bacriminta isku mid ah ee loogu talagalay cacti.
Xilliga xagaaga waxay isticmaalaan bacriminta macdanta ku jirta oo waxay sameeyaan hal mar toddobaadkii. Bacriminta dabiiciga ah waxay u baahan yihiin in la isticmaalo labadii usbuucba mar.
Ka hor inta aysan dhirta gaarin da'da saddexda sano, waxaa la gashadaa sanad kasta dherer leh dhexroor ballaaran. Taas ka dib la beddelay kaliya sida loo baahan yahay.
Noocyada abuur, goynta iyo habka loo isticmaalo.
Dhirta yaryar iyo dhirta si fiican loo dhisay waxay u baahan yihiin inay ku dhejiyaan fiilada, tani waxay keenaysaa in ka badan Bloom. Si ay u dheeraato waqti dheer - waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo muddada iftiinka dayrta guga iyo xagaaga, waa inay ahaataa ugu yaraan 11-13 saacadood.
Caleemaha ubaxyada ayaa badanaa la gooyaa oo ku ridaa marxalado. Ka dib markii ubax, afkoda of peduncles waa la saaraa, waxaa loo isticmaali karaa for rooting. Wakhtiga intiisa kale wuxuu socdaa xilliga dayrta illaa guga.
On dusha sare ee substrate iyo caleemaha mararka qaarkood u muuqdaan qowlaadaha caaryada. Waxay dhacaan haddii Kalanchoe uu si badan u waraabiyo heerkul aad u hooseeya.
Intaa waxaa dheer, ubaxa waa mid macquul ah in wax xagta oo budada ah, kaas oo muujin doona waraabin badan iyo kulaylka xad-dhaaf ah. Marka la soo bandhigo lana soo saaro afafka, waxay ka hadlaan iftiin la'aanta, tani waa geedi socod dabiici ah mana u baahan daaweyn.
Iyadoo ku xiran nooca caabuqa, fungicides Ridomil Gold, Mancozeb, Evparen, Tiuram, Vitavax iyo Benomil ayaa loo isticmaalaa daaweynta.
Succulents waxaa lagu weerari karaa rootworms cactus, nematodes, bristleworms, gaashaannada yar yar, caarada cas ee caag ah.
Sidaa darteed, warshad kasta oo cusub waa in lagu karantiilaa ugu yaraan laba toddobaad.
Cayayaanka soo socda ayaa ku habboon cayayaanka: "Antio", "Aktelik", "BI-58", "Keltan", "Neoron".
Marka lagu daro soo jiidashada dibadeed, Kalanchoe ayaa sidoo kale caan ku ah hantida daawooyinka.
Sidaa darteed, si ay u koraan at guriga warshad this ma aha oo kaliya aesthetically ku faraxsan, laakiin sidoo kale aad u faa'iido leh.
Xitaa xitaa sida ubaxyada shucuurta ah ee aan adkaada lahayn waxay u baahan yihiin daryeel habboon, sidaas awgeed waa muhiim in la waafajiyo heerarka kor ku xusan.